भन्सालीलाई प्रहरीले सोध्यो: सुशान्तलाई किन चलचित्रबाट निकालेको ? – Jagaran Nepal
भन्सालीलाई प्रहरीले सोध्यो: सुशान्तलाई किन चलचित्रबाट निकालेको ?
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्माहत्या रहस्यमय भएको भन्दै उनका परिवार तथा शुभचिन्तकले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । सोहीअनुरुप प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले सुशान्तको पूर्वप्रेमिकादेखि बलिउडकर्मीसम्मको बयान लिइरहेको छ ।
यस्तैमा, शुक्रबार प्रहरीले निर्देशक सञ्जयलीला भन्सालीको बयान लिएको छ । भन्सालीले सुशान्तलाई केही चलचित्रमा काम गराउन सम्झौता गरेको तर पछि हटाएको आरोप लागेको थियो । त्यसैले भन्सालीसँग प्रहरीले बयान लिएको हो ।
भन्सालीले सुशान्तलाई चलचित्र ‘रामलीला’सँगै चार चलचित्रका लागि सम्झौता गरेका थिए । यस्तै सुशान्तले भन्सालीसँग केही टीभी शोमा पनि सहकार्य गर्ने पक्का भएको थियो । तर, सुशान्तलाई कुनै जानकारी नदिई भन्सालीले सुशान्तलाई आफ्नो प्रोजेक्टबाट निकालेका थिए ।
प्रहरीले पनि भन्सालीलाई यसै विषयमा प्रश्न गरेको हो, ‘आखिर किन निकालिएका थिए त सुशान्त ?’ बलिउडमा बढ्दो नेपोटिज्मका कारण सुशान्त डिप्रेसनमा गएको र आत्महत्या गरेको धेरैको आरोप छ । त्यसैले ८ बलिउडकर्मीबीच अदालतमा फौजदारी मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको छ ।